ထူးဆနျးသောငှကျ အကောငျ ၈၀ နဲ့ ခရီးသှားလရှေိ့တဲ့ဆျောဒီမငျးသား – KK Daily News
ဆျောဒီမငျးသား၏ ငှကျတှအေားလုံးကိုယျပိုငျ passport ရှိပါတယျ။ ပုံမှာပွထားတာကတော့ လယောဉျပျေါကို လိုကျပါလာတဲ့ ငှကျအုပျပုံဖွဈပါတယျ။ဒီဓာတျပုံကိုတော့ အဲ့ဒီဆျောဒီမငျးသားလိုကျပါစီးနငျးခဲ့တဲ့ လယောဉျရဲ. လယောဉျမှူး ဆီက ရရှိတာလို့သိရပါတယျ။ဆျောဒီမငျးသားဟာ သူ့ ရဲ့ ငှကျ အုပျ နှငျ့အတူ လယောဉျလကျမှတျ အစောငျ ၈၀ ဖွတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။လူအမြားစုအနနှေငျ့ငှတှေကေို အဲ့ဒီလို နညျးနဲ့ သုံးစှဲနတောဟာ အံ့ သွ စရာကောငျးလှနျးပါပသေညျ။
တကယျတော့ အာရပျမှာရှိတဲ့သူကွှယျ မြားက ငှကျကောငျတှေ နဲ့ ခရီးသှားနိုငျခွငျးဟာ သူတို့ဘယျလောကျခမျြးသာကွောငျးပွသတာလညျးဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ယခု ဆျောဒီမငျးသားရဲ့ ငှကျတဈကောငျခွငျးစီဟာ ဆိုရငျ ဒျေါလာ ၂၅၀၀၀၀ လောကျတနျကွေးကိုပွသနတေယျလို့ဆိုရပါမယျ။ဆျောဒီမငျးသားအတှကျ ဘယျလောကျခမျြးသာသလဲသိခငျြရငျ ငှကျဘယျလောကျပါသလဲဆိုတာ ခနျ့ မှနျးကွညျ့ရုံနဲ့ သိနိုငျပါတယျ။
ကာတာ ကဲ့သို့ သော မြားစှာသော လကွေောငျးလိုငျးတှေ မှာ ငှကျတဈကောငျသယျမညျဆိုပါက ဒျေါလာ ၆၃၀ ထိ အပိုထပျဆောငျးပေးရလရှေိ့ပွီး အကှာအဝေးအလိုကျစြေးပိုပေးရပါသေးတယျ။
ထူးဆန်းသောငှက် အကောင် ၈၀ နဲ့ ခရီးသွားလေ့ရှိတဲ့ဆော်ဒီမင်းသား
ဆော်ဒီမင်းသား၏ ငှက်တွေအားလုံးကိုယ်ပိုင် passport ရှိပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတာကတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကို လိုက်ပါလာတဲ့ ငှက်အုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံကိုတော့ အဲ့ဒီဆော်ဒီမင်းသားလိုက်ပါစီးနင်းခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ရဲ. လေယာဉ်မှူး ဆီက ရရှိတာလို့သိရပါတယ်။ဆော်ဒီမင်းသားဟာ သူ့ ရဲ့ ငှက် အုပ် နှင့်အတူ လေယာဉ်လက်မှတ် အစောင် ၈၀ ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။လူအများစုအနေနှင့်ငွေတွေကို အဲ့ဒီလို နည်းနဲ့ သုံးစွဲနေတာဟာ အံ့ သြ စရာကောင်းလွန်းပါပေသည်။
တကယ်တော့ အာရပ်မှာရှိတဲ့သူကြွယ် များက ငှက်ကောင်တွေ နဲ့ ခရီးသွားနိုင်ခြင်းဟာ သူတို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာကြောင်းပြသတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ယခု ဆော်ဒီမင်းသားရဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ခြင်းစီဟာ ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ လောက်တန်ကြေးကိုပြသနေတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဆော်ဒီမင်းသားအတွက် ဘယ်လောက်ချမ်းသာသလဲသိချင်ရင် ငှက်ဘယ်လောက်ပါသလဲဆိုတာ ခန့် မှန်းကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
ကာတာ ကဲ့သို့ သော များစွာသော လေကြောင်းလိုင်းတွေ မှာ ငှက်တစ်ကောင်သယ်မည်ဆိုပါက ဒေါ်လာ ၆၃၀ ထိ အပိုထပ်ဆောင်းပေးရလေ့ရှိပြီး အကွာအဝေးအလိုက်ဈေးပိုပေးရပါသေးတယ်။